Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Xuquuq iyo waajibaad / Loo gaystay dhibaato
Caruurta waxay dhibaato ka soo gaari kartaa dagaal dhanka gudaha qoyska uga yimaada. Waxaa kale oo ay ku dhaawacmi karaan haddii ay arkaan waalid loo hanjabayo oo la garaacayo. Way badantahay in dagaalkan laga sheego wax aan macno lahayn oo ay dafiraan qofka wax garaacay iyo kan la garaacay labadaba. Laakiin caruurtu waxbay maqlaan, arkaan oo dareemaan.
BOJ waa urur ka shaqeeya in dhibanayaasha dembi soo gaaray helaan taageero. Waxaad wici kartaa telafoonkooda taageerida 0200 – 21 20 19.
Dhanka Xuquuqdaada waxaa ku jirta warbixin loogu talogalay adigaaga ah dhalinyaro ee loo gaystay dhibaato la xiriirta sharafta iyo cadaadis. Waxaa kale oo aad wada-sheekaysi ku weydiin kartaa wixi ku saabsan xuquuqda, jaceylka, guurka qasabka ah iyo gudniinka.
Dheeraad ku saabsan ka akhri bogga intarnatka ee Dina rättigheter